Macallimow, qaynuunkee baa sharciga uga weyn? / Kolkaasuu ku yidhi isaga, Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. / Kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya. / Ku labaad oo u ekina waa kan. Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada. / Sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay sudhan yihiin labadan qaynuun. Matayos 36-40